Ny antsoina hoe courant na herinaratra dia angovo ateraky ny fifindran'ny électrons libres ao anatin'ny matériaux conducteurs, na singa azon'ny herinaratra andehanana, toa ny fil vita amin'ny varahina.
Ny courant dia lanjaina ny heriny amin'ny tension U na Voltage na Volt (V) sy ny Intensité I (Ampère A).
Ny tension Volt izany dia ny vesatr'ilay herinaratra (force électrique), fa ny Intensité na Ampérage kosa dia ny fitosaky ny herinaratra mivezivezy ao anatin'ny lalana mitondra herinaratra (débit électrique).
Ny Puissance (Watt) izany dia ny tanjak'ilay herinaratra P= U x I = Tension x Intensité
Ohatra courant 230V
P= 6 ampères x 230V = 1 380 watts
P= 8 ampères x 230V = 1 840 watts
P= 10 ampères x 230V= 2 300 watts
P= 20 ampères x 230V= 4 600 watts
Misy karazany roa io courant na herinaratra io, courant continu sy courant alternatif.
1- Courant continu
Matetika hitatsika amin'ny fiara na Plaque solaire.
Izy dia herinaratra mandeha amin'ny diany tokana, avy any amin'ny mihabo (+) mandeha any amin'ny mihiba (-). (Sens conventionnel unique, de la borne positive (+) à la borne négative (-) à l'extérieur du générateur). Fa ny électrons kosa avy any amin'ny mihiba no mandeha any amin'ny mihabo.
Asiana marika CC (Courant Continu) na DC (direct current en anglais) amantarana azy. Na asiana famatarana =-= izy.
Ny Courant continu dia azo ara-tsimika amin'ny alalan'ny batterie na Plaque solaire, na azo avy amin'ny dynamo na alternateur.
Kely ny tension ho entiny raha amin'ny fiara, ka izay no mahatonga azy na kasihina aza dia tsy miteraka loza loatra ho an'ny vatana, indrindra ny fo sy ny hozatra. Ka na hikasika courant batterie 12V dia tsy maninona.
Fa raha ambony kosa ny herinaratra, dia ny courant continu no tena ratsy indrindra.
Tandremo izay mampiasa Plaque solaire ka nasiana convertisseur, fa ny convertisseur dia mamadika ny courant continu ho lasa courant alternatif, ary ampiakariny ny Intensité, ka dia hanaikitra ny Courant mivoaka amin'ny convertisseur.
Toy izany koa ny groupe électrogène izay mamoaka courant alternatif 220V.
2 - Courant alternatif (AC na famantarana ~)
Eto indray dia mandroso miverina ny courant, ka tsy misy izany ny borne négative sy positive, fa fréquence na hafainganam-pandehan'ny herinaratra mandroso sy miverina no refesina, io ilay Fréquence na Hertz (Hz).
Ampiasaina kokoa ny Courant alternatif satria mora taterina sy taritina lavitra, tsy betsaka ny herinaratra very, fa ny courant continu mora mafana ary be very an-dalana. Ny Courant alternatif mora akarina na ampidinina ny heriny.
Ny courant alternatif dia azo amin'ny fiodinan'ny turbine, ka arakaraky ny afangainam-pandehan'ny turbine izany ny fréquence ho azo.
Ny herinaratra ao an-trano no misy azy io, ka lazaina fa 50Hz izy raha norme eoropeanina ary 60Hz raha norme amerikanina.
Ny Amerikanina dia efa ela no nanana ny herinaratra araka ny namaritan'i Thomas Edison azy hoe ny 110V no tsara ampandehanana ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra.
Ny Eoropeanina taorian'ny ady lehibe faharoa 1945 dia rehefa potika ihany ny tanàna dia nanavao ny fotodrafitrasa sy ireo fitaovana rehetra mandeha amin'ny herinaratra any an-trano, dia nampiasa ny 220V satria mora vidy kokoa noho ny 110V.
Ny Amerikanina sy ny Amerika atsimo nijanona tamin'ny 110V hatramin'izao satria lafo loatra taminy ny nanavao ny fotodrafitrasa sy ireo fitaovana rehetra any ampiasaina any an-trano.
Ka ny Eoropeanina, ny Afikanina ary ny aziatika no mampiasa 220V.
Ny eto Madagasikara dia 220V - 50Hz ny courant alternatif omen'ny Jirama ny tokatrano.
Ilay resaka Tarif 14 sy Tarif 16 dia resaka varotra herinaratra, fa tsy misy hifandraisany amin'ny resaka courant atao eto. Ny Tarif 14 natokana ho an'ny olon-tsotra izay tsy mampiasa fitaovana firy, sy tsy mandany firy, dia hafa ny vidin'ny Courant aloany.
Ireo izay mampiasa fitaovana matanjaka, ary mandany courant, sy ireo orinasa ihany koa dia Tarif 16.
Mbola miditra ny resaka 1ère tranche, dia hafa ny vidiny, ary raha mihoatra ny 1ère tranche no lany ia tafiditra 2è tranche ka mialafo ny vidiny.
Raha tsorina dia politika sosialy io izany, izay kely fandaniana, dia olona sahirana, dia mora ny vidin-jiro aloany, izay manana sy be fandaniana dia mandoa lafo kokoa.
Ahoana ary izany ny installation électrique
Ny Jirama dia mitondra hatreo amin'ny compteur, manisa ny lany, ary manisy disjoncteur principal anapahana ny courant.
Eo dia arakaraky ny abonnement no anomezany ny herinaratra. Fa matetika dia disjoncteur 30A - 230V no omeny eo.
Izany hoe P= U x I = 230 x 30 = 6 900Watts izany no zakan'io disjoncteur io, ka raha mampiasa ambonin'izay dia midina ny disjoncteur manapaka ny courant.
Fer fipasohana 1500W
Ampoule 60W ny iray, raha miara-mirehitra ny 10 dia 600W
Ny chauffe eau sy ny bouloir efa 2500 W
Ny chargeur, Télé, frigidaire, ny ordi...
Raha trano iray misy mpanofa maromaro izany dia mety tsy aharaka.
Raha anao installation vaovao, dia tsara raha sarahina ny mitondra ny jiro, sy ny mitondra ny prise.
Mividiana disjoncteur différentiel, izany hoe disjoncteur manapaka tsirairay ireo installation électrique, ohatra atokana ny mitondra ny jiro, atokana ny mitondra ny prise. Azo atokana isaky ny étage ny trano. Azo atao isaky ny efitra na isaky ny fitaovana iray lehibe toa ny fatana, machine à laver na frigidaire, fa fandaniam-bola ihany izay.
Ny antsoina hoe différentiel izany dia fusible hoy isika tamin'ny installation teo aloha, fa ny fusible rehefa tapaka dia soloina, fadio ny manolo fusible asiana tohizana fil kely, fa ny différentiel dia mitsambikina izy raha misy court-circuit na mihoatra ny fampiasana ny Puissance courant, dia rehefa milamina ny olana dia ampiakarina fotsiny izy. Fusible tsy mety may izy zany fa midina fotsiny. Ny différentiel izany no misolo ny fusible tany aloha, izay tsy ampiasaina intony.
Misy karazany maro ny différentiel, misy miaro amin'ny vatan'olombelona raha sendra nahakasika courant, dia hitany, ary avy dia mipika midina izy. Somary lafo fa miantoka ny mety fisian'ny loza.
Amin'ny courant continu dia misy ny (+) sy (-) ny courant na masse hoy ny mpanao fiara, miloko mena ny fil (+) ary mainty na marron matetika ny (-) na ny masse, izay apetaka amin'ny vatan'ny fiarakodia.
Amin'ny courant alternatif any an-trano kosa dia Phase no misy courant, ary Neutre ny iray, na andeha atao hoe Phase ilay (+), ary Neutre ilay masse na (-) (Fa tsy misy an'izay (+) na (-) izay akory ny Courant alternatif any an-trano)
Amin'ny fiarakodia, dia misy masse na (-) avokoa ireo fitaovana rehetra ampiasaina, jiro, radio, télé, clim, mini frigo, GPS, chargeur téléphone, allume cigare, calculateur, démarreur, airbag, lève vitre..., fa ny Plus (+) no tapahina amin'ny interrupteur, na ny clé Neiman, na ny relais sy fusible rehetra.
Amin'ny courant alternatif any an-trano kosa dia ny Neutre (na (-) amin'ny fiara), dia iny no aparitaka omena ny jiro na ny fitaovana rehetra (fil manga tanora), fa ny Phase ((+) amin'ny fiara) no tapahana amin'ny disjoncteur différentiel, amin'ny interrupteur raha jiro, na bouton poussoir raha fatana ...
Araka ny hitatsika dia ny prise, na misy Phase sy Neutre aza dia mandeha foana na mivadika aza ny fampidirana ny chargeur ohatra, tsy mitovy amin'ny fiara toa ny allume cigare na chargeur fiara, tsy mandeha ny torche na radio raha mivadika ny (+) sy (-) pile na batterie.
Ahoana no ahafantarana fa Neutre na Phase ny fil iray.
Tokony ho loko manga tanora, fa misy mampiasa mena na mavokely ihany koa ny Neutre, ary mainty na marron ny Phase, misy mampiasa manga na mena ihany koa.
Aza matoky anefa, mividiana testeur tournevis ireny, ka apetaka amin'ny testeur tournevis ilay fil misy courant, ary ny tanana mikasika amin'ilay ambonin'ny tournevis testeur, ka raha mirehitra ilay jiro kelin'ny tournevis dia Phase izy izay, aza mikasika io fil io fa mahafaty. Raha tsy mirehitra izy dia Neutre izy zay.
Ka rehefa tapahana amin'ny différentiel izany io Phase io, dia azo kasihina avokoa ny fil aorinany.
Izay no mahatsara ny anasiana différentiel hanavaka ny installation, ka raha jiro fotsiny ohatra no amboarina, dia ny différentiel jiro ihany no tapahina, fa tsy tapaka ny prise mitondra ny frigo, fatana, sy ordi..., raha sendra mipika koa ny fatana, dia tsy tapaka ny jiro, afaka tapahina ny différentiel mitondra ny prise, nefa ny jiro tsy maty, dia afaka hiasana na alina aza no misy olana.
Mailo hatrany anefa, aza misaraka amin'ny testeur tournevis. Ny testeur Voltmètre dia ho an'ny corant continu no tena miasa ahitana ny (+) sy (-), fa amin'ny courant alternatif, dia tsy hita amin'io ny Phase sy Neutre, fa hita fotsiny hoe misy courant ny réseau.
Raha misy Terre kosa ny réseau, ilay fil maitso sy mavo iny, dia raha apetraka amin'ny fil Phase sy Terre ny multimètre, dia misy courant 230V eo, ny Neutre sy Terre kosa dia tokony tsy misy courant eo, raha tena tsara ny Terre.
Ny Terre dia installation manokana, izay misy varahina mirefy 1.5m alevina any ambany tany, hitondra ny courant any raha sendra misy fuite circuit. Resaka sécurité koa iny izany, ialana amin'ilay mikasika fatana na machine à laver izay misy rano ka sendra misy courant, dia iny Terre iny no mitondra ny courant fa tsy mandeha loatra amin'ny vatana.
Ahoana ny branchement disjoncteur différentiel
Jerena amin'ny tournevis testeur ny courant mivoaka amin'ny disjoncteur Jirama na groupe, na Convertisseur, izay mampirehitra ilay ampoule amin'ny tournevis no Phase. Iny no sitonina hiditra amin'ny différentiel milahatra eo amin'ny tableau électrique.
Tsinjaraina ampitohizina amin'ny fil matevina, mitovy loko izy (Shunt), mba ahazo Phase avokoa ny fidiran'ny différentiel, avy ao ambany matetika, fa jereo ihany sao misy entrée- sortie ny disjoncteur différentiel azonao.
Tester o amin'ny Ohm-mètre ny marche-arrêt n'ilay disjoncteur mbola tsy branché. Izany hoe rehefa ampiakarina - position (1) ilay disjoncteur dia tokiny hifampitohy ny ambany (entrée) sy ny sortie (ambony), ary Position (O) rehefa ampidinina dia tokony tapaka ny courant.
Ny Ohm-mètre, ankoatran'ny fijerena ny lanjan'ny résistance, dia eto izy hijerena raha mitohy ny circuit na tsia, test de continuité du circuit. Raha tsy mitohy ny circuit, izany hoe tapaka ny Disjoncteur position (0), dia tokona valeur = 1 no omen'ny Ohm-mètre, fa raha mitohy ny circuit na position (1) dia tokony ho valeur = 0 no hita amin'ny Ohm-mètre.
Testeur ilaina, tsy lafo loatra ny vidin'ny multimètre tsara ananana, tsy voatery mampiditra courant izany rehefa misy fil na circuit tiana jerena raha mitohy na misy tapaka fa ampiasaina fotsiny amin'ny tendrony roa ny testeur position Ohm-mètre dia hita na mitohy na tsia ny fil na ny circuit, na koa misy ahiana misy fil Phase na Neutre mifampikasika. Tandremo fa mety mamitaka raha misy ampoule mipetaka, nefa manao test, dia hitany io resistance ampoule io ka mety hihevitra isika fa mifampikasoka ny Phase sy Neutre, piho ny interrupteur na esory aloha ny ampoule.
Arakaraky ny Intensité n'ilay différentiel amin'izay no hisitonana ny fil avy eo ambony sortie hitsinjara amin'ny réseau, na ho jiro izy, na ho prise.
Installation Mitondra ny jiro
Matetika dia différentiel 10A no ampiasaina, izany hoe Puissance P= 230 V x 10A = 2300Watts ihany no zakany, Ampoule 60W miisa 38 eo. Raha mampiasa LED izany isika, dia LED 6W mitovitovy amin'ny hazavan'ny ampoule 60W. Lafolafo eo ampividianana ny LED (6 000ariary eo) nefa tsy mandany courant. Raha samy mirehitra 1ora ny LED sy ny ampoule tsotra 60W dia ny iray izany mandany 6W = 0.006Kwh, fa ny ampoule tsotra dia mandany 60W = 0.060Kwh.
Raha mirehitra adiny 10 isan'andro x 30j izany dia 0.006Kwh x 10h x 30j = 1.8Kwh isambolana ny LED, ary 0.060Kwh x 10h x 30j = 18Kwh isambolana ny ampoule 1 tsotra.
Raha eto Antananarivo 370ariary ny 1ère tranche Kwh dia mahalany 666ariary isaky ny ampoule LED 6W, ary 6 660ariary isaky ny ampoule incandescente tsotra izay mora ampividianana 800ariary.
Raha misy ampoule 10 izany ao an-trano, dia 6 660ariary raha LED ary 66 600ariary ny vidin'ny jiro ankoatran'ny frigo, télé, fatana..., raha ampoule tsotra isam-bolana. Vetivety izany dia ammorti na miverina ny vidin'ilay ampoule LED 10 novidiana (10 x 6 000ariary = 60 000ariary), facture 1 volana dia efa vita. Latsaka 10 heny ny vidin-jiro raha LED no ampiasaina.
Mangalaha izany différentiel 10A dia efa ampy raha jiro. Ka ny Neutre dia alefa mivantana amin'ny douille ampoule ilany, ny Phase kosa dia ampandalovina amin'ny interrupteur aloha tapahany na alefany vao miverina any amin'ny ampoule ampirehitra azy.
Ny asan'ny interrupteur izany dia mpanapaka na mpandefa ny Phase, fa ny Neutre avy dia mandeha mivantana any amin'ny ampoule.
Installation Mitondra ny prise:
Raha manatrika ny prise ianao, dia ny lavaka ankavia no Neutre, ary ny lavaka prise havanana no Phase. Ny Terre ilay vy kely mitranga ambony.
Araka ny efa nambara, aza matoky satria mety tsy ianao no nanao ny installation, ka tsy hifanaraka ny lokon'ny fil sy ny fipetrahany amin'ny prise. Testeur hatrany aloha vao mikasika.
Mangalaha différentiel 20A-25A, dia ny Neutre zarao amin'ny prise rehetra, en parallèle, izany hoe ny ilany havia rehetra dia ampifandraiso amin'ny fil manga tanora na izay loko nosafidianao hatrany amboalohany atao Neutre avokoa, ny Terre raha misy dia ampifandraiso amin'ny Terre avokoa amin'ilay fil maitso sy mavo.
Ny Phase kosa dia miala amin'ny disjoncteur principal Jirama, dia ampandalovy aloha amin'ny différentiel 20-25A avy ao ambany (entrée), izay vao sotonina avy eo ambony (sortie) aparitaka amin'ny prise rehetra lavaka havanana.
Raha misy amboarina izany ny prise, dia ampidinina fotsiny ny différentiel prise, izany hoe tapaka ny Phase dia azo iasana tsy misy atahorana ny prise rehetra miankina amin'iny différentiel iny, tsy voatery tapahana ny jiro, na ny étage hafa izay tsy miankina amin'iny fa manana ny disjoncteur différentiel azy mitokana, tsy miankina amin'ny réseau prise.
Misy étiquette azo asiana soratra ny différentiel ahitana hoe iza no différentiel manapaka ny réseau iza. Fa araka ny voalaza, na tapaka aza ny différentiel, testeur aloha vao mikasika fil.
Fil ahoana no ampiasaina:
Raha ny ao an-trano dia courant alternatif monophasé, izany hoe tokana ihany ny Phase misy courant, dia:
Raha mitondra ny jiro 10A, dia cable 2 x 1.5mm² ny section, izany hoe kelikely izy, misy fil roa ao anatiny, na telo miaraka amin'ny Terre.
Raha mitondra ny prise kosa dia 20-25A, ampy raha 2 x 2.5mm² ny habeany na 3 x 2.5mm² raha misy fil telo ka ny iray Terre.
Raha tsorina izany dia arakaraky ny habean'ny fil no herinaratra zakany, raha jiro fotsiny izany dia ampy ny fil 1.5mm² ny habeny, fa raha hitondra prise izay hisy fatana, sy rice cooker ary fera dia 2.5mm² no tsara raha kely indrindra.
Izany no mampitsonika an'ireny rallonge prise multiple vandivandy sinoa ireny, lazainy fa mahazaka 3000W nefa vao mipetaka ny fera dia mitsonika ny fil.
Tsara kokoa ny fil rigide, izany hoe varahina tokana no ao anatin'ny fil, fa tsy ireny souple na misy fil kely marobe mirandrana ireny. Satria mafy sy mahazaka hafanana kokoa ny fil rigide.
Afaka mampiasa fil mandeha singany raha installation encastrée any anaty rindrina misy tuyau orange. Tsy mifanalavitra anefa ny vidiny, raha izaho manokana dia cable blindé misy fil efa miaraka hatrany no ampiasaina na dia encastré aza. Azo antoka tsy misy maratra ny fil amin'izay. Voasana esorina fotsiny ilay fonony blindage iny rehefa eo amin'ny Tableau électrique, na anaty boitier mba tsy hibahana toerana ampisavoritaka installation.
Fadio ny mampiasa fil autoradio mainty sy mena mitambatra ireny amin'ny ao an-trano, tsy natao hitondra courant 220V ireny fa mora mitsonika, ka dia mora hisy court-circuit na akosonaratra ka ampirehitra trano. Mety hidina ny disjoncteur, fa ilay fil efa mirehitra any anaty any dia andoro trano.
Mividiana prise sy douille ary interrupteur tsara fa aza makikitra mividy ny mora nefa mora mitsonika, ireny prise na interrupteur bakoly ireny no ao anatiny no tsara.
Ny disjoncteur différentiel dia 6000 ariary eo dia mahazo tsara, miampy ny boitier hipetrahan'ireo différentiel ireo.
Mividiana fitaovana famoasana fil, pince à denuder, fa tsy kakerina amin'ny nify ny fil amoasana azy, na amin'ny antsy na lame, na dorana briquet. Ny antony dia misy fil manana couche ao anatiny, iny no tena mitondra ny courant, ka raha voakiky iny dia mihena ny tanjak'ilay fil, sady mety maratra ilay fil, ka mora tapaka avy eo.
Miovaova araky ny norme izy io
Fa amin'ny ankapobeny
Rouge, marron, noir no Phase na loko hafa
Ny manga tanora no Neutre
Ny maitso sy mavo mitambatra no Terre.
Rehefa tsy misy an'izay, dia farito ny loko anananao izay ho Phase sy Neutre. Ampiasao hatrany ny testeur tounevis ahafantaranao ny Phase.
Aza adino, ny Phase no tapahana amin'ny disjoncteur, ny différentiel na fusible, na interrupteur. Rehefa tapaka ny Phase dia afaka miasa ampilaminana tsy misy courant ny réseau.
Ahoana ny fanaovana branchement
Miainga amin'ny disjoncteur principal Jirama na groupe na convertisseur dia ampandalovy différentiel ilay Phase, ary sitony sortie différentiel ny Phase ka ento anaty boitier ny Phase sy ny Neutre izay direct avy any amin'ny disjoncteur principal Jirama.
Antsoina hoe cable ilay misy fil roa na telo ao anatiny, misy blindage ety ivelany izy. Ny fil kosa dia ilay tokana misy lokony samihafa iny.
Raha misy fil 2 ao anatiny ka 1.5mm² ny habean'ny varahina, dia antsoina hoe cable 2x1.5mm² izy izay.
Raha misy fil 3 manana habe 2.5mm² izy, dia cable 3x2.5mm² izy izay. Fa tsy hoe cable triphasé akory, resaka samihafa ny monophasé, sy ny triphasé, ny courant ao an-trano matetika dia 220V monophasé.
Misy ihany ny manana courant force 380V fa vitsy izany. Ny orinasa no mampiasa an'ireny.
Tarito manomboka eo amin'ny douille ny cable 2x 1.5m², samy omeo ny fil Phase sy Neutre ny douille, ka tarito hatreo amin'ny boitier.
Ny Neutre ampifandraiso amin'ny domino misy ilay Neutre avy any amin'ny disjoncteur principal jirama, ny Phase avy amin'ny différentiel efa tonga ao anaty boitier kosa tarito amin'ny cable 2 x 1.5mm² hafa, ka ny fil iray hipetraka amin'ilay domino misy ilay Phase sortie différentiel ao anaty boitier, ny ilany kosa hipetraka amin'ilay fil Phase avy any amin'ny douille efa tonga ao anaty boitier.
Ilay cable kosa taritina hatreny amin'ny interrupteur, ny fil iray mitondra ilay Phase hapetaka amin'ny cosse entrée interrupteur, ary ny ilany apetaka amin'ny cosse sortie interrupteur, ka ny Phase no tapahan'ny interrupteur.
Tsy misy Neutre mandehandeha izany any amin'ny interrupteur any, fa Phase daholo no any.
Raha misy jiro maromaro tiana hiaraka hirehitra, dia any amin'ny douille any na ao anaty boitier no hisitonana atao parallèle, Phase mifandray amin'ny Phase, Neutre mifandray amin'ny Neutre.
b- Interrupteur va-et-vient
Ny antsoina hoe Interrupteur va-et-vient, dia jiro iray, na maromaro mipetaka miaraka en parallèle, miara-mirehitra na miara-maty, no azo vonoina na ampirehetina amin'ny toerana roa samihafa.
Ampiasaina matetika izy io amin'ny couloir na tohatra, efa lasa alavitra ianao tsy andeha hiverina anapika amono ilay jiro narehitrao teo ampidirana.
Misy karazana Interrupteur va-et-vient mihitsy. 3 ny azy ny cosse.
Efa ataovy en parrallèle avokoa aloha ny douille rehetra raha misy ampoule maromaro atambatra hiaraka hirehatra, ohatra ny ao amin'ny couloir na tohatra ambany sy ambony.
Tonga dia omeo Neutre avy hatrany ny iray amin'ny fil hifandray amin'ny Neutre douille.
Ny Phase manakaiky ny boitier misy ny Phase avy any amin'ny différentiel no ampidiro amin'ny cosse L n'ny interrupteur N°1, ary ny L interrupteur N°2 dia apetaka amin'ny fil hitondra Phase amin'ny douille, izay douille akaiky eo ampidirana azy satria efa en parrallèle avokoa ny douille maromaro.
Asiana fil, matetika miloko voloparasy, fa raha tsy misy dia ilay cable 2 x 1.5mm² iny ihany ampiasaina, hajao fotsiny ny lokon'ny fil, hampitohy mivantana tsy misy tapaka, ny cosse N°1 an'ilay interrupteur N°1, sy ny cosse N°1 amin'ny interrupteur N°2.
Toy izay koa ny cosse N°2 interrupteur N°1 ampifandraisina mivantana amin'ny cosse N°2 an'ilay interrupteur N°2.
Hajao izay fil mitovy loko no amin'ny 1 sy ny ilany amin'ny 2. Io jonction io no antsoina hoe Navette.
Raha misy Terre dia mipetaka mivantana amin'ny vatan'ny abat-jour ny Terre. Tsy miditra any anaty douille ny Terre. Matetika tsy ilaina io Terre io raha jiro.
Apetraka aiza ny interrupteur
Ny norme haavo hipetrahan'ny interrupteur de 1.30m miala ny tany, Azo ovaina amin'ny hitiavana azy, fa tsinjovina tsy takatry ny ankizy loatra, ary ampitoviana avokoa ny haavo ao antrano, hialana amin'ny tsapatsapa maizina, sy ny fahazarana hipetraka. Tsy atao any ambadiky ny varavarana na varavaran-kely, rehefa mivoha, ny interrupteur. Tsy takonana armoire na rideau fa atao libre mora hita sy takarina izy.
Ahoana ny position interrupteur
Rehefa position arrêt izy na maty dia miletika ny ambony, ka rehefa velomina dia tsindriana midina. Ny ahatsiarovana azy, dia rehefa maty ny interrupteur dia miletika ny bouton ambony mba tsy hiangona eo amin'ilay bouton fanapihana iny ny vovoka.
Ampitovio daholo ny position marche - arrêt interrupteur, fa tsy hoe ny sasany midina no mamono azy, ny hafa miakatra. Raha sendra delestage mantsy nefa andeha atory na hivoaka ny trano, dia tsy tadidy iza no jiro efa maty, iza no tsy voapiaka. Mandreraka ny mitadidy hoe ny WC miakatra, fa ny douche midina.
Aza manisy prise na interrupteur ao anaty douche, fa ataovy aty ivelany ny interrupteur satria misy rano ao mety hitera-doza. Mivoaka ny douche mbola lena, ka mety anapiaka jiro, nefa ny tongotra lena mety mitera-doza. Tadidio fa ny Phase no ao anaty interrupteur.
Misy ireny fitaratra misy jiro eo amboniny, sady misy interrupteur no misy prise. Tsy dia tsara izy ireny, fa ilaina fitandremana. Tadidio fa ilay mpihira malaza Claude François, tao anaty douche no nanitsy abat-jour nivilana no nahafaty azy, raha ny tantara.
Aleo hivelan'ny douche no manao brushing, sady tsy manetsina lavabo ny volo no azo antoka ny securité. Ny rasoir électrique autonome ireny ampiasaina, na toeran-kafa miharatra fa tsy ao amin'ny douche izay mando ny fanambaniny. Aty ivelany mamana rano bouloir na ilay résistance famanana rano androana, fa tsy ao anaty douche. Aza manisy chauffage électrique anaty douche.
Raha atao anaty douche ny machine à laver dia tsy maintsy asiana Terre ny installation. Ary dia tandremana ny sady hanao douche nefa misy machine miodina.
d- Double interrupteur
Mety interrupteur iray ihany fa misy commande 2 no ampiasaina, ohatra ny ilany mampirehitra ny jiro ambony plafond, ny ilany kosa mampirehitra ny jiro mural mipetraka amin'ny rindrina.
Raha misy jiro maromaro tiana hirehitra miaraka dia efa ataovy en parallèle avokoa aloha, miala amin'ny douille 1 dia miampita amin'ny iray... na samy taritina eo amin'ny boitier avokoa ny fil hitondra ny Neutre sy ny hitondra ny Phase.
Vao omena Neutre izany ny douille iray dia ahazo Neutre avokoa ireo douille rehetra en parallèle efa mitohitohy ireo.
Hitondrana Phase niainga tao amin'ny boitier amin'izay ilay interrupteur double. Misy cosse telo (3) ao, ny ambony cosse tokana ampidirana ny Phase, ary ny cosse roa ambany, ny iray ampitohy amin'ny fil ampifandraisina amin'ny fil hitondra Phase ho an'ilay ampoule plafond ohatra, ary ny cosse faharoa ambany hitondra ny Phase hapetaka amin'ilay fil hitondra ny Phase ampoule murale.
Fil 3 eo izany, ka na mampiasa cable 3 x 1.5mm² dia ny iray izany mitondra Phase, ary ny roa mitondra ny retour Phase rehefa nitohy tamin'ny interrupteur.
Raha tsy manana cable misy fil 3 anatiny, dia mampiasa cable roa fa misy fil iray izany tsy miasa amin'ny cable iray, na azo ampiasaina interrupteur eo akaiky eo. Ampidirana Phase avy amin'ilay double interrupteur io interrupteur faharoa io, ka ny 4e fil tsy niasa teo no lasa mitondra retour de Phase ho an'izay ampoule tiana ampirehetana hafa. Lasa triple eo izany ny interrupteur.
Tandremo tsy azo ampitondraina Phase ny fil Terre maitso sy mavo. Aza ampiasaina interrupteur izany ireny cable misy fil 3 misy Terre ireny. Sao mamoadoza tsy tadidy ka ampidirina any amin'ny Terre ny Phase.
Avy dia taritina avy eo amin'ny disjoncteur principal jirama andeha ao anaty boitier ny Neutre, Raha mifanakaiky amin'ny boitier jiro ny boitier prise, dia azo alaina ao ny Neutre. Tandremo fa ny Neutre alaina ao tokony efa notaritina fil 2.5mm² avy any amin'ny disjoncteur principal jirama, fa mitsonika ny fil raha 1.5mm² no nakana azy hamatsy ny jiro.
Alaina sortie différentiel 20-25A ny Phase, ampidirina amin'ny domino manokana efa nasiana shunt, mba hanana domino azo isitonana ny Phase.
Avy eo vao taritina hitsinjara amin'ny trano, parallèle avokoa, izany hoe ny Neutre mifandray amin'ny Neutre, avy eo ankavian'ny prise, ary ny Phase akana hitaritana ny Phase eo ankavanana. Hajao ny lokon'ny fil. Ny Terre hifandray amin'ny Terre.
Atokano ny boitier jiro sy ny boitier prise mba tsy hifangaro ny Phase jiro limitée 10A sy ny Phase prise 20-25A.
Ampilamina azy ohatra, dia tarito eny ambony manaraka plafond ny fil jiro miainga amin'ny boitier jiro, fa ny fil prise indray tarito anaraka sisiny ambany, ambony kelin'ny plainte miainga amin'ny boitier prise.
Mampiasa prise misy securité raha misy zaza an-trano, izany hoe ireny prise misy sarony ny lavaka, ka raha tsy miaraka miditra ilay lahin'ny prise appareil tsy misokatra ilay lavaka prise courant, ka tsy azon'ny ankizy ampidirana vy kely ohatra. Misy koa plastique toy ny prise azo asarona ireny prise ireny, fa iny mora tsoahan'ny ankizy.
Manaova asa madio sy milamina
Mampiasà domino, fa tsy afatopatotra fotsiny ny fil na ho fenoana barnadera na ho fonosina scotch na sparadrap. Mampiasa boitier de derivation raha misy sampanany maro.
Ento ao anaty boitier ny Phase sy Neutre, dia asio domino 2 samihafa ampifandraisina amin'ny fil ny ambany, na shunt, dia rehefa mila Neutre dia apetraka milahatra eo ambony domino Neutre fotsiny.
Toy izay koa ny Phase, atao domino mitokana maromaro ampifandraisina amin'ny fil matevina na shunt.
Apetao tsara amin'ny attache béton ny cable, ataovy mitovy ny elanelan'ny attache mba ho tsara endrika ny installation. Raha sendra tsy ampy ny fil ka voatery tohizana dia tohizo domino mifanaraka amin'ny haben'ny fil, ampitovio hatrany ny lokon'ny fil ampiasaina, raha sendra tsy mitovy dia farito tsara foana iza no Phase, iza no Neutre. Tsara raha anaty boitier foana ny domino, fa tsy tohizana eny ampanidinana eny ny fil. Aza tohizana fatotra ka ho fonosina barnadera na scotch na sachet dorana.
Serrer mafy tsara ny vis manery ny fil, andramo sitony raha tsy mihetsika, satria raha mihetsika dia hafana ary hirehitra.
Farany, na tsy hividy aza, dia mangalaha fotoana kely mandedeha amin'ireny grande surface mivarotra fitaovana électrique ireny, toa ny Sanifer, ABC sy ny hafa, mba mijery ny zava-misy, ao ny mora tsy araka ny eritreretina, ao kosa ny toro-hevitra aza misalasala manontany ireny vendeur ireny, afaka anoro hevitra anao izy, na tsy hividy aza, eny ambodin'Isotry betsaka ihany koa.
Tandremo ny contre-façon na ny fôpla. Ny installation électrique dia tsy hiova anatin'ny taona maro, ka aleo maka ny tsara hatrany. Matetika efa lany vola nanaovana trano anefa eo, ka maika ny ahavita dia mividy mora, ka atao hoe provisoire, ka rehefa manam-bola soloina, ny zava-misy anefa efa vita izy io, ka lasa provisoire maharitra na définitif mihitsy, izay mety ampidi-doza.